Esikhwameni Feng Shui - ukuheha ngemali amandla
Ekukhuleni, Feng Shui
Kusukela ezikhathini zasendulo, isikhwama iwuphawu ingcebo. Ngakho-ke, kudingeka ukhethe njengobaluleke kakhulu, kungenjalo impahla inhlalakahle ungaboni. Isikhwama semali Feng Shui kufanele kube ilungelo umbala, isayizi nendwangu ilungelo, bese ngokuqinisekile neze nalutho.
esikhwameni eshibhile akasoze neqhaza ekhangayo imali, ngoba wabeka ubumpofu amandla. Uma une imali eyanele yokuthenga i esikhwameni ezibizayo, thina Ingakhawulela esikhwameni sokwenyusa amanani isigaba. Okubaluleke kakhulu, yena wayengemuva uhlobo ukusebenza, abahloniphekile liletha imicabango yengcebo.
I esikhwameni esifanele Feng Shui ube banzi. Imali enkulu ukuphila isikhwama ezinjalo. Ngisho izikweletu ubukhulu ngobukhulu kumele angena kuyo ifomu ukunwetshwa. Uma isikhwama sakho semali incane, kusho ukuthi ungalindeli imali enkulu. Lokhu kusho ukuthi abazange yavela.
Uncamela yemvelo lesikhumba wallets, ngoba le nto kuhle sihamba amandla impahla. Ngaphezu kwalokho, izinto zemvelo ziyingxenye okuhlala isikhathi eside futhi eqinile. Lezi touch nice, baphumula kahle bakhathale. izinto Artificial akuzona kunikela ekhangayo amandla ezibonakalayo, kodwa kunalokho, uzinameke ukufinyelela.
Inani elihle kunawo libizwa shades brown. Lokhu kungafaka uhla eligcwele ophuzi, isiliva legolide imibala, kanye black. Ngokuvamile, wonke umhlaba, nensimbi imibala. Ngo Feng Shui esikhwameni obomvu Uphinde abhekwe evumayo, kodwa udinga ukwazi ukuthi akubona bonke ngenxa yemibala yawo ebomvu usizo ukuheha ngemali amandla. Kuyinto engathandeki ukuthi esikhwameni kwaba okukhanyayo noma elikhanyayo-orange umbala. Blue, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluluhlaza kanye nemibala oluhlaza Feng Shui kuyaqedwa ngokuphelele, ngoba umbala amanzi ungakuvumeli ukuba kulondolozwe imali esikhwameni kuwo.
Ukuheha imali ku Feng Shui
Isikhwama semali Feng Shui kuyadingeka ukuba ningabi nje kuphela ngendlela efanele ukukhetha, kodwa futhi ukuba ugcwalise kahle. Ukuze ukuheha amandla impahla esikhwameni ngokwesiko ehlanganiswe zemali ezintathu ezihlobene Chinese, okuyinto zingathengwa esitolo okukhethekile. Njengoba kahle, uma isikhwama sakho kuyoba isithombe green tea, Mint, noma ehlukuzweni.
Amathiphu ekubhekaneni esikhwameni ukuheha ngemali amandla
Isikhwama semali Feng Shui akufanele neze nalutho. Kufanele kube ngisho uhlamvu olulodwa, ukuthi, asikho isidingo ukuchitha zonke * lokugcina. Imali ku-wallet yakho futhi kufanele agcinwe kahle: the "ubuso" futhi ngokuvumelana "isikhundla": ihlelo omkhulu wokuqala, bese esihle.
Khumbula ukuthi ukunqoba, inikelwe noma wathola imali ngeke injabulo, kudingeka balahle kubo nje kalula njengoba kangakanani kuwe futhi wahamba. I esikhwameni akufanele esishwabene, ngayinyomfoza ngayiphosa futhi zidabukile izikweletu. Qiniseka ukuba bavuthele bill ngaphambi sikubeka esikhwameni. Nokho, isikhwama sakho akufanele onezinto amasheke ezingadingekile, izinhlu, nezinye izincwadi ezivamile. Lahla izibi endaweni, ngaphandle kwalokho imali awaveli. Njengoba nje ne-wallet yakho ulahlekelwe isikhalazo ezibukwayo, ngokushesha esikhundleni salo esisha. Scrapes futhi izimbobo abonisa imali ku ukuguquguquka yakho, futhi ngokusebenzisa izimbobo shabalala amandla impahla.
Isibalo Gua ezimfundisweni Feng Shui
Indlela kabusha ilungelo imali isihlahla
Ngempela gourmet isaladi nge amawolintshi kanye inkukhu hhayi kuphela ...